Kusiya Chikepe: mutambo wevhivhi wevhidhiyo weLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kusiya Chikepe iuto rehondo revarwi rehondo rinokufadza. Zvinosuruvarisa kuti kwave nekunonoka, asi ivo vakaratidza dzimwe nhau maererano nemavhidhiyo esiti yavo mune inozivikanwa Chitoro cheValve, Steam. Gara wakatarisira nhau dzenhau iyi nekuti inovimbisa nekuda kwezvavakatiratidza isu vavaki. Kunonoka kuri pachena nguva dzose kunosuruvarisa, haisi iyo nhau iyo vese vanoda uyu mutambo wevhidhiyo vanoda kuva nawo, asi tinovimba ndeyekuti pakupedzisira uve nechigadzirwa chekupedzisira chakanaka.
Mukuru weboka rekusimudzira reAbhon Ship aive nemazwi mashoma ekutaura nezvazvo: "Tinotarisira kunzwa mhinduro uye kuenzanisa mutambo nenzvimbo yedu. Isu takazvipira kupa yakanyanya kunaka mhando chiitiko kuona kuti kunyangwe yedu yekutanga kuburitswa izere uye yakabwinyiswa sezvinobvira. Parizvino, mhinduro kubva kune edu testers yanga iri zvakasarudzika zvakanakaasi unomirirei ipapo? Nenguva yekuwedzera, tinogona kuita kuti mutambo uve nani.".
Tichaenderera mberi nekumirira nhau nekuti zvinoita sekuvimbisa. Panguva ino isu tinogona kungogutsikana nekutarisa vhidhiyo iri chiutsi uye nemifananidzo mitsva yavakaburitsa. Ndinovimba haumirire kwenguva refu uye tichava nayo yeLinux munguva pfupi. Kubva pane zvinoita senge ichauya kutanga kwa2018, asi isu hatizive iro chairo zuva nekuda kwekunonoka kwatakataura pakutanga. Uye zvakare, ivo vanogadzira vakatosimbisa kuti kuchave neshanduro yeGNU / Linux, saka izvi zvinovimbiswa nekukurumidza kana kuti gare gare ichasvika ...
Uye kana zvichibva kuLxA tinodaro Abandon Ship ndeimwe yemitambo yakanakisa yegungwa zviripo isu hatina kupfupika, mavhidhiyo anonakidza. Saka zvakakosha kumirira uye kuburitsa imwe mari kuti utore mairi. Inoita kunge ine yakajeka-yakajeka magiraidhi maererano nesitayera, asi zvakare inovimbisa inonakidza Gameplay uye zvechokwadi inonakidza chaiyo-nguva kurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kusiya Chikepe: mutambo wemavhidhiyo mutambo weLinux
Yakakurumbira Puppy Linux 7.5 kugovera kunovandudzwa